दाह्री: अम्रिकाका लागि हानिकारक छ – RAJESHares KOIRALAnd
दाह्री: अम्रिकाका लागि हानिकारक छ
January 31, 2014 June 21, 2020
यसबेला अम्रिका र अम्रिकानेलाई दाह्री भएका एकुन्टा मान्छ्याले डर देखाइराख्या छ । ती दाह्री भा’ मानिस सर्वगुण सम्पन्न भा’ पनि सुन्या त हो । आम मुसलमानजस्तै टाउकाँ सेतै कपडा बाँधेका (कतै कात्रै त बाध्या होइनन् नि बा !), लामो कुर्ता लाका, बूढोजस्ता देखिने, दाह्री पाल्या, साँगुर्‍या आँखा, चोसे पर्‍या चिउँडा, पातलो र अग्लो शरीर भा’ ती दाह्री पाल्या मान्छ्या हुन् – ओस्मा बिन लादेन । लादेनका बोली चाम्रा छैनन् रे नम्रा छन् । उनी आफ्ना मित्रालाई झैं सबैलाई राम्रा व्यावार गर्नाका खातिर प्रसिद्ध छन् । अझ उनलाई पढाउने एकुन्टा मास्टरले त के पनि भनिदिए भने विद्यार्थी रहँदा ओस्मा त लजालु पनि थे । केट्केटीमा कतै मस्किन्थे कि ? उनका बाका पैसट्ठी केट्केटी थे । बिचरा ओस्मा ५२ औं नम्बराँ सन्तान पर्‍या हुन् । तिनी किन पो खतर्नाक हुन्थे ? तर खतर्नाक भे । उनले अम्रिकाविरुद्ध धार्मिक युद्ध (जेहाद) कै घोष्णा गर्‍या छन् । प्रत्येक मुसलमानलाई उनले गर्‍या आग्रह यस्तो छ, ‘जहाँ भेटिए पनि तिम्ले अम्रिकाने सैनिक र अम्रिकानेलाई मारी हाल ।’ कुरा पनि कस्ता निर्दयी, निर्दलेका मान्छ्याले गर्नाजस्ता ।
एकुन्टा मान्छे, त्याँ पनि दाह्री पाल्याले विश्वमा त्यत्रा अग्ला घरै ठ्याङको ठ्याङ गोली हान्या जस्तै गरी हवाइज्याज लगेर हान्द्या । कत्रो आँट ? अर्का हवाइज्याजले त हाउगुजी विभागमै लगेर ठोक्द्या । सारा संसारा मान्छ्यालाई डराँ पारेर बस्या कुन्नि के पो भन्दा हुन् क्या रे प्यान्टागान रे र अझ अर्का हवाइज्याजले पा’ भे राष्ट्रपतिका घराँ लगेर हान्ने विचाराँ रे’छन् । बाटाँ नपड्क्या भे’त, त्यसले अझ सर्वन्यास नै गर्न्या रे’छन् । तै बा तै बा राष्टापति भन्या बुश चाहिँ बँचे, धन्य भो बा ।
कुरा यी दाह्री पाल्या एकुन्टा मान्छ्यामात्र कहाँ हुन र ? अम्रिकानेहरू अरू सँग पनि थुरूथुरू हुँदा रे’छन् । काठमान्डूबाट उड्या भारतको विमान अपहरण गर्‍यापछि छाडदेउ-छाडदेउ भनेर छाड्या ती मान्छे मौलाना मजुद अजहर पनि दाह्री पाल्या रे’छन् । अजहरले भारतलाई थर्काएर बस्या छन्, ओस्माले संसार थर्काजस्तो । भनौं कि हिन्दी बोलीमा अजिगरलाई अजगर भनेजस्तै अजहरलाई अजगर भने भो बा ।
अम्रिकानेलाई लादेनका मात्र डर कहाँ छन् र ? उहिल्यै जन्म्या र उहिल्यै मर्‍या । अझ कम्लिष्ट व्यवस्थाका बाबु भनाउँदा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्ससँग ता अझ डराउँछन्, यी अम्रिकाने । कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सका कुरा मानेर कम्लिष्ट व्यवस्था भाका देशको ता नामै पो नलिउँ कि झै गर्छन । अम्रिकाका राष्ट्रपति बुशका बाबु अर्का बुशका पालाँ त अझ कति कम्लिष्ट देश ढले । अब दुई-चार बाँकी छन् । यी पनि छोराँ पालाँमा रहलान् कि नरहलान् त्यो अत्तोपत्तो नाँही ।
दाह्री पाल्या भन्या जो होस्, भूत होस कि मान्छे अम्रिकानेलाई तर्साउन पुग्या छ । ओशोको चोसो तेर्स्याएर अम्रिका पस्या रजनिशदेखि सारा अम्रिका डरायो । रजनिश धेर दिन त्यहाँ बस्या भे सारा अम्रिका के हुन्थ्यो थाहा भेन । रजनिश भारत फर्के । भन्छन्, ‘अम्रिकानेले अलि विस्तारै थाहै नपाई मर्ने ओखती ख्वाइदे रे । त्यसैले ती दाह्री भा’ रजनिश पनि स्वर्गेको बाटो तताका रे ।’ जे होस्, दाह्री पाल्या भन्या अर्का मान्छ्या पनि थे । तिनका डर पनि अम्रिकाले नभोग्या कहाँ हुन् र ?
बोकाझै छोटा छोटा दाह्री चै पाल्या तर यो संसारमा नभा अर्का एकुन्टा मान्छ्या छन् । तीनसँग पनि अम्रिका अझै डराउँछ । संसारकै ठूलो देश बनाएर, कम्लिष्ट व्यवस्था हालेर, छाड्या थे उनले । तर ती भने ओस्माजस्ता लामा दाह्री नपाल्ने मान्छ्या हुन् । तै पनि ती कम्लिष्ट नेताका नामैदेखि डराउँछ, अम्रिका । रूसाँ राख्या उनको लाश फ्याँक्नालाई उनका मान्छेलाई भनिरहन्छ । मर्‍या मानिसको लाससँग पनि के के डर ?
ओस्मा फेला पारे भने खरानी नपारून्जेल अम्रिकानेले भात पनि नखाँदा हुन् ? रूसाँ भा कम्लिष्ट व्यवस्था ढल्या नभे यसबेला अम्रिकासँग टक्कर लिने देश ता हुन्थ्यो । अलि शान्ति हुन्थ्यो कि ।
तिनै मार्क्स र एंगेल्सका चेला छन् । अम्रिकानेका छिमेकमा बस्छन् । बुढा छन् । नानाथरीका गाली गर्छन् । बाज्या उमेराँ फिडेल क्यास्ट्रो (फिनेल र क्यास्ट्रोल भन्याजस्तो पनि लाग्छ ।) पनि दाह्री पाल्या बुढा हुन् । ओस्माका जस्ता लामा र बाक्ला दाह्री पाल्या त कहाँ हुन् र ? तै पनि डर छ, अम्रिकालाई ।
इजेरल भन्ने देशालाई असाध्ये माया गर्छन्, यी अम्रिकाने । दुई-चार जना मुसलमानले थोरै कित्ता देओ न प्यालेष्टिन भन्ने देश बनाउँछौ भन्दा मान्दै मान्दैनन् । त्यसमा पनि कित्ता माग्ने बूढा छन्, यासेर अराफात । ती बूढालाई त दाह्री काट्नाका फुर्सदै नाहि रे । इजरेलको माया पनि गर्ना छन्, तिमलाई कित्ता दिन्छुम भनेर लोभाँ पनि पार्छन्, यी अम्रिकाने । तै पनि झुलाझुलाई गर्‍या छन् । बूढा अराफात कहिले मर्ना हुन् ? कुकुरले सिनो ढुक्याझै गर्‍या छन् ।
दाह्री नपाल्या फाल्या मान्छ्या भने पनि अम्रिकानेका मित्रा, दाह्री पाल्या जति सबै शत्रु । ओस्माले पनि ज्यान बचाउने भे दाह्री फालुन । अम्रिका जाने भिसा कतै पाइहाल्छन् कि ?
(२०५८ कार्तिक ३ को ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा प्रकाशित)